I-Tan y Bryn-iNdawo yeHolide yase-Welsh-i-Snowdonia
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJane
I-Tan y Bryn yindlu ye-4* yokuziphekela yeholide esekwe kwilali ezolileyo yaseCorris ekuMazantsi eSnowdonia. Ihlaziywe ngokumnandi kwaye inobubele kwisilwanyana sasekhaya, silala ukuya kuthi ga kwi-4. Ijikelezwe lihlathi leDyfi kwaye ifikeleleke ngokulula kwiinduli zasekhaya kunye neentaba ukuhamba okumangalisayo & ukukhwela intaba. Indawo entle yokukhwela ibhayisekile kunye nokukhwela ibhayisekile entabeni. Imizuzu engama-25 ukusuka elwandle. I-ale pub yokwenyani kunye ne-wholefood café yimgama nje wokuhamba. itreyi eyamkelekileyo enekhekhe lemveli laseWelsh kunye nebhaskithi yasimahla yezigodo zesitshisi ekufikeni kwayo.
Yakhiwa ngo-1864, iTan y Bryn ligumbi lezindlu elinembali elidweliswe kwiBanga lesi-II nelikubuyisela umva ngexesha libonelela ngobutofotofo behlabathi lanamhlanje. Kutshanje iwongwe ngohlelo lwe-4* yiBhodi yabakhenkethi baseWales.
4.94 out of 5 stars from 65 reviews
4.94 · Izimvo eziyi-65
ICorris yilali eyodwa yaseWales, encinci ngobukhulu kodwa inkulu entliziyweni. Ijikelezwe ngamaphandle anomtsalane kwaye sisiseko esifanelekileyo sokuhlola iinduli kunye neentaba ze-Snowdonia. UCorris unomoya owomeleleyo wasekuhlaleni kunye nomoya owamkelekileyo. Yongeza indawo yokusela ye-ale yokwenyani yasekhaya kunye nekhefi enencasa yendalo, zombini umgama nje ohamba umzuzu ukusuka kwindlwana. Omabini amaziko amkela izinja. Umjikelo wekona ukusuka kwindlwana yiCorris Railway, isiporo esincinci esimxinwa esigciniweyo, apho unokukhwela khona kuloliwe wakudala womphunga, uhambo oludumileyo lweentsapho. Kubathandi be-gin, kukho indawo yokulahla i-gin yalapha ngaphaya kwendlela eCorris Craft Centre, kumgama wokuhamba ukusuka kwindlwana. Idolophu engaselwandle i-Aberdyfi ikumgama oziimizuzu engama-25 kuphela nolwandle lwayo, izibuko, iikhefi kunye neendawo zokutyela.
Umbuki zindwendwe ngu- Jane
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Machynlleth